Lixabiso Aluminium ingxubevange radiator extruded iindawo mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Elungiselelweyo aluminium ingxubevange iprofayile extrusion
Ubungakanani befilimu imalunga ne-1μm, efanayo ne-substrate. Ubophelelo lomelele kakhulu, olwenza ukuba umphezulu wengubo udlule kwaye uthintele i-oxidation ekuqhubekekeni. Ke ngoko, i-aluminium alloy uqobo aloyiki ioksijini, kwaye akukho corrosion ye-oxygen.
Ingxubevange yealuminium ine-aluminiyamu eshinyeneyo yokukhusela ifilimu ngaphezulu, ngenxa yoko kunzima ukutyabeka umhlwa. Nokuba iyasetyenziswa, ibhloko yokulwa umhlwa ekumgangatho ongaphakathi wealuminiyamu alloy kulula ukuwa phantsi kokuhlanjwa kwamanzi ngaphakathi kwiradiyetha. Ke ngoko, iiaradium alloy radiators akufuneki zisetyenziswe kwiinkqubo zokufudumeza embindini, kodwa zilunge kakhulu kwiinkqubo zokuzifudumeza.
Iimpawu zealuminium ingxubevange yeempawu: ngenxa yokutshabalalisa ubushushu kwealuminium, umgaqo wangaphakathi wokulwa nokubola kwiradiyetha
Unyango lwangaphakathi lokulwa umhlwa kwiradiyetha kukuthambisa umphezulu wangaphakathi kwiradiyetha ngomaleko wokubambelela okuhle (ukubambelela) kunye nokumelana nomoya.
Iinkcukacha zeprofayili ye-extrusion ye-aluminium eyenziwe ngokwezifiso
Egqithileyo 6016 aluminium ingxubevange unyango ubushushu CNC iindawo machining
Okulandelayo: Amalungu e-Anodized aluminium alloy machining